रगतको कमी हुन नदिन हाम्रै भान्सामा पाइने यी चिजहरु खाने बानिँ बसाल्नुहाेस् ! पढेर सेयर गर्नुहाेला – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : रगतको कमी हुन नदिन हाम्रै भान्सामा पाइने यी चिजहरु खाने बानिँ बसाल्नुहाेस् ! आजकल धेरैजस्तो मानिसमा रगतको कमी अर्थात रक्तअल्पता (एनेमिया) जस्तो समस्या देखिएको छ । गलत खानपान कारण धेरैलाई याे समस्या हुने गर्दछ, जसलाई चाहेर पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।
शरीरमा रगतको कमी हुँदा कमजोरी महसुस हुनुको साथै रोग प्रतिरोधक क्षमता पनि कम हुन जान्छ जसको कारण व्यक्तिको स्वास्थ्य पनि शिथिल हुन् थाल्छ जुन पछि गएर हानिकारक साबित हुन सक्दछ । भविष्यमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या सामना गर्नु नपरोस् भनेर आज देखि नै जागरुक हुन् आवश्यक छ।
तपाईकाे शरीरमा रगतको कमी हुन् नदिने यस्त उपायहरु जसका लागि बजार धाइरहन आवश्यक पर्दैन, तपाईको आफ्नै भान्साकोठामा सबै पाउनुहुनेछ:-
१) दिनमा तीन पटक पालुङ्गोको जुस पिउनुहोला । पालुङ्गोमा भिटामिन ए, बी, सी बाहेक प्रोटिन, सोडियम, क्याल्सियम, फस्फोरस, क्लोरिन, फाइबर र फलाम पर्याप्त मात्रामा हुन्छ ।
२) गोलभेंडाको रस, शरीरमा रगतको मात्रा बढाउने एक उत्कृष्ट एवं सहज माध्यम हो जुन घरमा गोलभेंडाको प्रयोग बढी हुन्छ त्यस घरपरिवारका सदस्यले रगतको कमीको समस्या सामना गर्नुपर्दैन ।
३) भुटेको, पो-लेको,उसिनेको मकै तपाईको स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै लाभदायक हुनेछ। हरियो मकैको दाना उमालेर खाँदा आमाशय मजबूत हुनेछ र रगत बन्ने गति पनि बढ्नेछ।
४) नुन र लसुनको सेवनले रगत सफा हुन्छ । जसको रगतमा प्लेटलेट्सको कमी हुन्छ तिनले नुन र लसुन खाँदा फाइदाजनक हुनेछ । खाना सँगै लसुनको सेवन गर्दा तपाईको लागि लाभप्रद हुनेछ ।
५) कटुस एक यस्तो खाद्य पदार्थ हो जसले शरीरलाई शक्ति दिनुको साथ-साथै प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फलाम र खनिजको कमी पूरा गर्छ । काँचो कटुसको सेवनले शरीरमा रगतको कमी पनि पूर्ति गर्छ ।
६) रगतको कमी जस्तो समस्याको लागि स्यालफुस्रोको सेवन गर्नु एक राम्रो उपाय हो । शरीरमा रगतको कमी हुँदा छालामा ए-लर्जी हुन् लाग्छ । यस्तो अवस्थामा स्यालफुस्रोको जुस दिनमा तीन पटक पिउँदा यस समस्याबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ ।
७) जसको शरीरमा रगतको कमी हुन्छ तिनले दालचिनी, सुप उमालेर दिनमा तीन पटक पिउनुहोला । यसले रगत पनि बन्छ र शरीर स्वस्थ पनि रहन्छ । ८) अमला र फडिलको रस बराबर मात्रामा मिलाएर पिउनुहोला । यसरी पिउँदा शरीरमा रगतको कमी हुन् पाउँदैन् ।
Prevनेपालमा आज काे-राेना संक्रमितकाे सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्याे (कति थपिए त आज हेर्नुहाेस्)
३० वर्षीया सावित्री तामाङ र ५७ वर्षे जगत गुरुङ डेराबाट पक्राउ